संविधानमा बालअधिकार ः व्यवहारमा बालश्रम::DainikPatra
सामान्यतया बालबालिका भन्नाले साना उमेरका केटाकेटी भन्ने बुझिन्छ । बालबालिकाको परिभाषालाई जो जसले जसरी परिभाषित गरे पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएका व्यक्तिलाई ‘बालबालिका’ भनिन्छ । अधिकार भन्नाले कानुनी, परम्परागत र नैतिक रूपमा प्राप्त न्यायोचित हक वा दाबी भन्ने बुुझिन्छ । राज्यले बालबालिकाहरूका लागि भनेर कानुनी रूपमा दिएको अधिकार नै बालअधिकार हो । बाँच्न पाउनु, संरक्षण पाउनु र सबै पक्षको विकासका अवसरहरू पाउनु नै बालबालिकाहरूका मौलिक हक र अधिकार हुन् ।
कुनै पनि देशको मुल कानुनलाई संविधान भनिन्छ । संविधानमा देशका हरेक नागरिकका कर्तव्य र अधिकारलाई समावेश गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य राखिएको छ । भाग ३ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई समेटिएको छ । यस धारामा बालबालिकाको आफ्नो पहिचानसहित नामकरण जन्मदर्ताको हकलाई पनि सुरक्षित गरिएको छ । परिवार र राज्यबाट उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार खेलकूद मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तिगत विकासको हकलाई पनि राखिएको छ । कुनै पनि कलकारखाना र उद्योगमा काममा लगाउन नपाइने, बालविवाह, गैरकानुनी काम, अपहरण र बन्धकमा राख्न नपाइने, शारीरिक र मानसिक यातना दिन नपाइने, बाल अनुकूल न्यायको हक दिनुपर्ने जस्ता हकहरूलाई समेत निर्दिष्ट गरिएको छ । असहाय, अनाथ, अपाङ्ता भएका द्वन्द्वपीडित विस्थापित र जोखिममा परेका बालबालिकालाई संरक्षण र सुविधा दिने जस्ता अधिकार उल्लेख गरेर १० वटा उपधारामा बालबालिकाको अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा मात्र नभएर बालअधिकारको विषयमा समकालीन समयमा समेत धेरै चर्चा परिचर्चा समेत भएको पाइन्छ । बालबालिकाहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बाल अधिकार सैद्धान्तिक रूपमा मात्र नभएर व्यवहारमा समेत लागू गर्नुपर्ने आह्वान सहित नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिन्छ । संविधानमा बालअधिकार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र हरेक वर्ष बाल दिवस मनाइए पनि अझै सबै बालबालिकाले व्यावहारिक रूपमा अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । विद्यालयमा पढ्ने उमेरका बालबालिकाहरूलाई विभिन्न ठाउँमा बालश्रम गराइएको कुरा हामी विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र सामजिक सञ्जालमार्फत् सुन्दै आएका छौं ।
बालअधिकार र बालहितका सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ मा धेरै कुरा लेखिएको छ । खै ती कुराहरू व्यवहारमा लागू भएको ? कानुनी कागजमा लेखेर राख्नलाई मात्र ती नियमहरू बनाएको त पक्कै पनि होइन होला ? विभिन्न किसिमका बालहितका राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूमा नेपालले पनि हस्ताक्षर त गरेकै छ । जसका हातले ती सन्धि र महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तिनैको घरमा उनीहरूका श्रीमतीले ती बच्चालाई ढाड मस्कने गरी भाँडा माझ्न र कपडा धुन लगाउँछन् । ढिला काम गरेको बहानामा कति पटक कान निमोठिएका छन् । बाबु नानी भनेर सुन्न खोज्ने कानले छि ः छि र दूर दूरका गालीहरू सुन्न बाध्य छन् । के बालश्रमको अन्त्य कागजी र कानुनी किताबका पानामा अधिकारका कुरा लेखेर मात्र होला ?
देशमा शान्ति नभएर, आतङ्क भएर, युद्धमा परेर, परिवारबाट साथ छुटेर विचल्लीमा परेका कतिपय बालबालिकाहरू पनि बालश्रममा परेका छन् । बालश्रम एउटा जटिल समस्या हो । तर, यो समस्यालाई हामी सबै जना मिलेर समाधान गर्न खोज्यौं भने सफल हुन्छौं । बालश्रम निवारणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा धेरै संघ संस्थाले काम गरेका छन् । अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल श्रम ऐन २०४८, बाल ऐन २०४९ आदि जस्ता संस्था र कानुनी दस्तावेजले यस सम्बन्धी धेरै कामहरू गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर, ती निर्णयहरू पाँचतारे होटलसँगै बसेर खाएको मासु र चिउरासँगै बिलाएर गएका छन् । उनीहरूले त्यहाँनिर यो पनि बिर्सन्छन् कि तिनीहरूको अगाडि खानाको मेनु लिएर आउने, गिलासमा पानी लिएर आउने मानिस पनि बालक नै हुन् भन्ने । अनि कसरी हुन्छ ? बालश्रमको अन्त्य सोचौं त एक पटक …… ।
कागजको पानामा मात्र यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर भत्ता पचाउने काम मात्र नगरौं । गाउँ ठाउँमा गएर समस्या बुझ्ने र ती समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय खोजौं। गरिबी निवारण शिक्षा र साक्षरताका कार्यक्रमलाई सफल र प्रभावकारी रूपबाट अगाडि बढाउँदै कार्यान्वयन गर्ने बानी बसालौं । यसले गर्दा समाज शिक्षित हुन पुग्छ । समाज शिक्षित भयो भने यस बारेमा जानकारी सबैलाई प्राप्त हुन्छ । देशमा रहेको बेरोजगारी समस्या हटाउनका लागि वैकल्पिक उपायहरू ल्याउने गरौं । सम्पूर्ण अभिभावकलाई शिक्षाको महŒवबारे बुझाउने गरौं । सञ्चार माध्यमहरूमा विशेष बालबालिका अभिमुखीकरण र व्यावहारिक कार्यक्रमहरू ल्याउने गरौं । उनीहरूलाई हित हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने गरौं । यति गर्यौ भने बालश्रमको समस्यालाई केही मात्रामा भएपनि समाधान गर्न सकिन्छ ।
बालश्रम एउटा अपराध जस्तै हो । बालकलाई श्रममा लगाउने व्यक्तिलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बालकलाई बालश्रमबाट मुक्त गराउनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ भने हरेक नागरिकले यो हाम्रो पनि कर्तव्य हो भन्ने जानेर काम गर्नुपर्छ । यति मात्र नभई हरेक स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले एकएक जना गरिबी र अभावमा छट्पटिएका तथा बालश्रमिकका रूपमा काम गर्न बाध्य बालबालिकाको शिक्षादीक्षाका लागि जिम्मा लिने वातावरणको सिर्जना गरेमा दिन दो गुना रात चौगुना बालबालिकाहरूले बालअधिकार प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् । त्यसैले बालअधिकार सुनिश्चित गरी बालश्रमको अन्त्य गर्न घरपरिवार, गाउँ, टोल, सहर र सदनमा विशेष छलफल चलाऔँ । बालश्रम अन्त्य गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट लागि परौँ । सबैले हातमा हात, काँधमा काँध राखेमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न र बालश्रम अन्त्य गर्न अगाडि बढौं । आउनुहोस् तपाईं हामीसँगै मिलेर बालश्रमलाई अन्त्य गर्ने प्रण आजै गरौं ।